-Dhacdo Annaga nagu saabsan - Shenzhen Xinhui Technology Co., Ltd.
Shenzhen Xinhui Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Noofambar 2010. Shirkadda ka horraysay (Xiamen Xinhui Electronics Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2007) waa la raray.
Hadda waxay ku taal degmada Pingshan cusub, Shenzhen, Shiinaha, oo leh goob juqraafi sare leh.Iyada oo ku dhawaad ​​​​15 sano oo waayo-aragnimo maarayn wax soo saar ah, waa soo-saare wax-soo-saar ku- jihaysan oo isku-dhafan wax-soo-saarka, iibinta iyo naqshadeynta.
Inta badan soo saar furayaasha xuubka FPC/PCB/EL/LED, badhamada xuubka, wareegga xuubabka, wareegyada taabashada, dareemayaasha culeyska baabuurta, dhejiyeyaasha caloosha EMS, masaajiyeyaasha cagta EMS, masaajiyeyaasha EMS, sumadaha khamriga EL ee iftiinka leh.Guozi Chips, LCD, shaashadda taabashada iyo alaabada kale.
Warshadu waxay dabooshaa aag dhan 3800 mitir oo laba jibbaaran +, shirkaddu hadda waxay ka shaqeysaa 96 qof, mashiinnada wax soo saarka ee ugu weyn waa ilaa 300 oo qaybood, wax soo saarka bishiina waa 2 milyan oo xabbo.Shirkaddu waxay kaloo taageertaa habaynta, habaynta, OEM, calaamadaynta, iwm.
Saaxiibada u baahan sidoo kale waxay nagu aamini karaan inaan iibsanno alaabada kale ee loo habeeyey Shiinaha.Badeecadaha Spot waxaa lagu soo rari karaa isla maalintaas sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, iyo alaabta la habeeyey waxaa lagu soo rari karaa 8 maalmood sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.Shirkaddu waxay leedahay nidaam maarayn tayo leh oo dhamaystiran oo cilmiyaysan.
Shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansantaa mabda'a "xunnimo ku salaysan, dhagax rukun oo tayo leh, adeeg tayo sare leh, iyo u hoggaansanaanta qandaraaska".Iyada oo leh alaab tayo sare leh, sumcad wanaagsan, iyo adeegyo tayo sare leh, alaabadu waxay si fiican ugu iibisaa ku dhawaad ​​​​30 gobol, magaalooyin, gobollo madaxbannaan iyo kuwa fog oo lagu iibiyo waddamada horumaray sida Mareykanka / Jarmalka / Kuuriya / Japan / UK / Faransiiska / iwm.
Si daacad ah ula kaashada macaamiisha xaalad guul-guul ah, si wadajir ah u horumariya, oo dhalaalid wadajir ah u abuura.
Alaabta iibka ka dib: bixi hal sano oo dammaanad tayada badeecada ah, hal sano gudaheed dhibaatooyinka tayada badeecada ayaa lagu bixin karaa soo celinta.
Falsafada shirkadda: tayada marka hore, adeegga marka hore
Ujeedada ganacsiga: ka fakar waxa macaamiishu u maleeyaan oo samee alaabta ugu fiican.
Taariikhda Horumarinta Shirkadda Xinhui
Bishii Maarso2004, Xiamen Yonghui Electronic Membrane Switch Department Management waa la aasaasay.Bilowgii ganacsiga, aagga guryaha kirada ah ee loogu talagalay goobaha wax soo saarka waxay ahayd 50 mitir oo laba jibbaaran, oo leh saddex shaqaale oo keliya.Aasaasihii shirkadda, Mr. Li, wuxuu ahaan jiray qofka farsamada gacanta ku haya waaxda wax soo saarka ee warshadda beddelka xuubabka ee Shenzhen.
Bishii Febraayo2005Dalabka oo batay awgeed, goobta wax-soo-saarka iyo shaqaaluhuba kuma filna, markaa shirkaddu waxay u guurtay warshadda No. 386 ee Banshangshe, degmada Huli, magaalada Xiamen, waxayna ku dartay qalab wax-soo-saar iyo xadhkaha wax-soo-saarka, waxayna ku dartay 8 farsamo-yaqaanno bangiga.
Bishii Luulyo2007, Sababtoo ah baahida macaamiisha si ay u soo saaraan qaansheegaha canshuurta qiimaha lagu daray, si loo fududeeyo diiwaangelinta iyo canshuuraha, magaca waxaa loo beddelay Xiamen Xinhui Electronics Co., Ltd., oo leh 21 shaqaale wax soo saar ah oo dhan warshadda.
Ogosto2010, sababtoo ah shirkadu waxay lahayd qorshe horumarineed oo cusub iyo amarro kordhay, waxay heshay oo ay ku biirtay warshadda beddelka xuubabka ee Shenzhen, waxayna kireysay dhisme warshadeed oo 2,300 mitir oo laba jibbaaran ah oo ku taal Shenzhen.
Bishii Nofeembar2010, Shenzhen Xinhui Technology Co., Ltd. ayaa si rasmi ah loo aasaasay iyada oo shaqaalaha 43 ee warshadda oo dhan.
Meey dhexdeeda2013, Iyadoo ay sabab u tahay baahida wax soo saarka, waxaan soo iibsannay duubista ugu horreysa ee duubista mashiinka daabacaadda shaashadda oo buuxa, kaas oo daabacan kara wareegga qalinka / wareegga kaarboonka iyo daabacaadda qaabka filimka dhammaan duubista PET / PC.Isla mar ahaantaana, iibso gariiradda oo toos ah madbacyada dhinta goynta.Bilow nidaamka qalabka iswada ee shirkadda.
Bishii Disembar2017, baahida wax-soo-saarka awgeed, waxaa lagu soo kordhiyey saddex qalab oo duuban oo toos ah, oo mid ka mid ah uu ahaa mashiinka daabacaadda diiwaanka tooska ah ee CCD.
Sebtembar2018,Baahida wax-soo-saarka awgeed, waxaa la soo iibsaday laba madbacadood oo buul ah oo toos ah CCD.
Meey dhexdeeda2021, baahida wax-soo-saarka awgeed, waxaa la soo iibiyay laba madbacadood oo si otomaatig ah u daabacday, waxaana la kiraysanayay warshad cusub oo 1,500 mitir oo laba jibbaaran ah.
Shirkadda hadda waxay leedahay aag dhan 3800 mitir oo laba jibbaaran iyo 93 shaqaale ah.Shirkaddu waxay leedahay 52 qalab wax-soo-saar otomaatig ah iyo qalab wax-soo-saar nus-otomaatig ah, soo-saaraya furayaasha xuubka, dhejiska is-ku dhejinta, dareemayaasha culeyska xuubabka, masaajiyeyaasha EMS, wareegyada xuubka, FPC, xaashida kuleylka korantada iyo alaabada kale, kuwaas oo soo saari kara qiyaastii 3 milyan PCS halkii bil.